Diyaarada Turkish Airline oo qaati ka taagan Soomaali isticmaasha Baasa-booro been abuur ah, kuna hanjabtay ineey joojineyso duulimaadka muqdisho
Home Somali News Turkish Airline:Waan joojineynaa Duulimaadka Muqdisho
Turkish Airline:Waan joojineynaa Duulimaadka Muqdisho
Saraakiil ka tirsan shirkada duulimaadyada Turkish Airline, ayaa sheegay ineey jiraan dad Soomaaliyeed oo diyaaradooda ku raaca baasa-booro been abuur ah, waxaana arintaan gacan ka geysta rag Muqalasiin Soomaaliyeed ah.
Shirkada diyaaradaha Turkish Airlines, ayaa ah shirkadii ugu horeesay ee Sanadkii hore duulimaad Caalami ka bilaawday Muqdisho, oo 20 sano ahayd meel ka go’doonsan dunida, Xukuumada Soomaaliya ayaa horay usheegtay ineey jiraan rag muqalasiin ah islamarkaasna ku sugan wadamada Yurub kuwaasoo adeegsada baadabooro been abuur ah, islamarkaasna ay lacago ka qaataan dad ku sugan gudaha Soomaaliya si ay u geeyaan dalalka Yurub iyagoo isticmaalaya baasa-booradaas.
“Mushkilada waxay badatay markii ay diyaarada Turkish Airline, halkaan ka bilaawday duulimaadka Muqdisho ilaa Stanbul, Soomaalida Yurub ka’imaaneysa ee Isticmaalaya baasaboorada been abuurkana waxay ahaayeen kuwo aad usoo badanaya, si ay si sharci daro ah dad ugu tahriibiyaan dalalka Yurub” sidaa waxaa yiri Jeneral Gaafoow, oo ah madaxa hay’ada Jinsiyadaha iyo Socdaalka doowlada Soomaaliya.
Gaafoow, waxa uu sheegay ineey isbuucii hore ay gacanta ku dhigeen 3 qofood, kuwaasoo isticmalayay sharciyo been abuur ah, waxa uu sheegay in ragaan ay kamid ahaayeen dadka sida sharci darada ah Yurub ugu tahriibiya dadka, iyagoo ka qaadanaya kumanaan doolar.
“Waxay raadiyaan qofka la tahriibinayo qof u’eg oo yurub jooga si uu Baasaboorkiisa ugu baxo, iyadoon cidna fahmin, laakiin anaga arinkaas waan la soconaa” sidaa waxaa yiri Gaafoow.
Gaafoow, ayaa Saxaafada usoo bandhigay sharciyo been abuur ah, oo ay ka qaadeen kuwo si sharci darro ah dadka Yurub ugu dhoofiya, kana qaato lacago farabadan.
Merve Oruc, oo ku hadlaya magaca shirkada diyaradaha ee Turkish Airline, ayaa isna sheegay ineey jiraan dhibaatooyin aad ufarabadan oo ay ku qabaan dad si sharci daro ah ku raaca diyaaradooda, iyagoo isticmalaya baasabooro been abuur ah.
Merve Oruc, waxa uu sheegay in hadii doowlada Soomaaliyeed ay wax ka qaban weydo dhibaatadan, ay gabi ahaanba joojin doonaan duulimaadyada Muqdisho ilaa Stanbul ah.
Kadib 18 bilood kahor, markii ay Ciidamada AMISOM iyo kuwa doowlada Al-shabaab ka saareen Muqdisho, waxaa soo laabanayay nabadgalyada Caasimada, waxa soo noolaaday hamigii dadweynaha, waxaa dalka kusoo laabtay qurba joogtii oo bilaabay ineey sameeyaan maalgashiyo iyo dhismooyin farabadan.
Ka ganacsiga waxyaabaha sharci darada ah waa wax caadi ka ah halkan, mana jirto hay’ado si adag u dabagalaan, laakiin arintaan hada soo korortay hadaysan doowlada wax ka qaban waxay noqon doontaa mid dib ucelisa horumarka iyo rajada ummada Soomaaliyeed.